Nyochaa ọrụ mmegharị gị na Reactotron | Site na Linux
Luigys toro | | Mmemme
Gbanwee nwa maka akụkụ ya, ọ bụ usoro na-enye ohere mepụta ngwa ala maka weebụ, iphone na gam akporo iji React, nke nwere njikọta na ntọala dịka Angular, Ember, Azụ azụ n'etiti ndị ọzọ.
Ndị mmepe na-eji React.js na React Native nwere ike mepụta ihu dị ike, yana arụmọrụ dị elu, usoro dị ọcha na nke ọhụụ, nke jikọtara site na njikwa data dị elu. reactotron Maka akụkụ ya, ọ bụ ngwa na-enye anyị ohere inyocha ngwa anyị ji teknụzụ ndị a eme site na Linux, na-enyere aka ịpịpụ, nwalee ma gosipụta arụmọrụ ha.
1 Kedu ihe bụ Reactotron?
2 Atụmatụ Reactotron
Kedu ihe bụ Reactotron?
Ọ bụ ngwa mmeghe, mepụtara site na studio Enweghi ngwụcha Red, nke na-enye anyị ohere inyocha ngwa etolite etolite na React JS na React Native, akụrụngwa bụ ikpo okwu (Linux, Windows na MacOS) ma nwee obodo mara mma nke na-eweta mmelite ọhụrụ kwa ụbọchị.
A na-etinye Reactotron n'ime ngwa ndị ahụ dịka mmepe mmepe, nke gbanwere na nsonye 0 na oge mkpokọta, ozugbo enwere ike, anyị nwere ike ijupụta ngwa anyị yana usoro iheomume dị mma nke Ihe Omume nwere ọtụtụ arụmọrụ.
N'etiti ọtụtụ atụmatụ nke Reactotron anyị nwere ike ịkọwapụta:
Mwepụta dị mfe na ngwa mepụtara na React.js na React Native.
Ọ naghị agbakwunye ihe ọ bụla na usoro nchịkọta nke ngwa.
Lelee ọkwa nke ngwa ọ bụla.
Na-egosi arịrịọ API na nzaghachi.
Nwere ike ịrụ ule ngwa ngwa
Nwere ike nyochaa ọnọdụ nke akụrụngwa ma ọ bụ akụkụ nke ngwa.
Na-egosiputa ozi yiri console.log
Ọ gafeela arụmọrụ iji soro njehie zuru ụwa ọnụ.
Na-ekpo ọkụ gbanwere ọnọdụ nke ngwa gị, iji Redux ma ọ bụ osisi mobx-steeti
Kwe ka egosi ihe ngosi ihe osise na React Native
Na-enye gị ohere ịchọpụta nchekwa nchekwa Asynchronous na ụmụ amaala.
Advanced Omume usoro iheomume, nke-enye gị ohere soro ihe omume ka ha na-eme.
Nwere ike ịdenye aha na nsogbu nke ụfọdụ mmiri ma hụ ọkwa emelitere ha mgbe ị na-eji ngwa ahụ, ịrụ ụka adịghị ya na ọmarịcha arụmọrụ iji nwalee mmetụta nke ahụhụ ma ọ bụ njirimara nke otu.
Ọ nwere ndu ntinye ngwa ngwa na ngwa ngwa nke enwere ike ịchọta Ebe a, nke na-enye anyị ohere ịmalite iji Reactotron na nkeji nkeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Mmemme » Nyochaa ọrụ mmegharị gị na Reactotron
Google Summer of Code, na-ekere òkè na ọrụ zuru ụwa ọnụ